Myanmar I-Film Fest... (မြန်မာနိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်): La vita è bella/ Life is Beautiful (Italian အီတလီ)
La vita è bella/ Life is Beautiful (Italian အီတလီ)
အော်စကာ ၃ ဆုအပြင် တခြားနိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ဆု ၅၂ ဆုကိုရထားပြီး အကောင်းဆုံးဆု ၂၇ ကြိမ် nominate လုပ်ခံရတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းလေးပါ။ အဖြစ်မှန်ကို ဟာသနဲ့ရောပြီးရိုက်ထားတာပါ။ ဇာတ်လမ်းအစပိုင်းကတော့ Guido Orefice ရဲ့ စေ့စပ်ပြီးသား ဂျာမန်ကျောင်းဆရာမကိုလိုက်တဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းပါ။ အဓိကအပိုင်းကတော့ သားတစ်ယောက်ရပြီးမကြာခင် ဂျာမန်စစ်တပ်က ဂျူးလူမျိုးတွေကို အကျဉ်းစခန်းသွင်းတဲ့ထဲမှာ Guido တို့ မိသားစုလည်းပါသွားပါတယ်။ အဲ့ဒီစခန်းမှာ သူ့သား survive ဖို့အတွက် အကြောင်းအမျိုးမျိုးရှာ ကြိုးစားတဲ့ ဇာတ်လမ်းပါ။
The film starts with Guido Orefice (Roberto Benigni) relocating from the country toalarge Tuscan town where he falls in love with schoolteacher Dora. She is already engaged to another guy, but Guido stills fights for her. The story continues5years later, during wartime, Guido is married to Dora and they haveason called Giosue. Guido is of Jewish origin, and he is sent toaconcentration camp with Giosue and Dora follows them, only to be sent to another part of the camp. This isastory of Guido learning how to use his fertile imagination to help his son survive their internment inaNazi concentration camp.
ဘာသာစကား (language) - အီတလီ (Italian)
ရုံတင်သည့်နှစ် (Date of Release) - ၁၉၉၇ (1997)
အမျိုးအစား (Gerne) - ဟာသ သမိုင်း Drama (Comedy, Drama, Historical)
ရုပ်ရှင်ကြည့်ရန် (To Watch) - Source (1) (Click Here) [with English Ver]
Source (2) (Click Here)
မှတ်ချက် - DivX Player Download လုပ်ဖို့လိုသည်။